စာပုံမှန် ပြန်ရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ တကယ်တော့ ရက်ပိုင်းလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အားတယ် မအားဘူးဆိုတာထက် ကိုယ်တိုင်လည်း စာဖတ်ဖြစ်သွားအောင် (၃) ရက်ခြားတစ်ပုဒ်နှုန်းလောက် ရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး စရေးတဲ့ အချိန်မှာ Blogger Team ရဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကြိုဆိုမှုကို စရတယ်။
Google ရဲ့ Automated System က ဘလော့ကို SPAM Blog လို့သတ်မှတ်ပြီး ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ တစ်ခါတည်း Delete လုပ်ပစ်လိုက်တာ။ တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။ ဘလော့ရေးခဲ့တာ ၇ နှစ်ကျော်ပြီ။တစ်ခါမှ ဒီလိုမဖြစ်ဖူးဘူး။ ဘလော့က Broken Links တွေ လိုက်ပြင်နေရင်းနဲ့ ချက်ချင်းကြီး Blog not found. ဖြစ်သွားတယ်။
ခဏနေတော့ Mail ထဲကို Blogger Team နေ စာတစ်စောင် ဝင်လာတယ်။
Restore Buttom လေးတွေ့လို့ နှိပ်တော့ တကယ် Spam Blog ဟုတ်မဟုတ် Blogger Team ကနေ ပြန်စစ်ဖို့ ၂ ရက်ကြာမယ် ပြောတယ်။ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတာပေါ့။ Automated System က ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ Delete လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Post အသစ်က ၃ ခုလောက် ရေးပြီးပြီ။ Backup မလုပ်ထားမိဘူး။ နောက်ပြီး ပို့စ်အဟောင်းတွေ ပြန်လိုက်ပြင်နေတာလည်း အပုဒ် ၂၀ လောက် ပြင်ထားပြီးနေပြီ။ (၂)ရက်စောင့်လို့မှ အကြောင်းမပြန်ရင် ဘလော့မရေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတောင် ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းပါတယ်။ (၁)ရက်ပဲ ကြာတယ်။ Blogger Team က စာပြန်ဝင်လာတယ်။
အမှတ်တရပါပဲ။ နောက်ဆို ဘလော့ကို ခဏခဏ ဖျက်လိုက် Reinstall လုပ်လိုက် လုပ်တာမျိုး ရှောင်ရမယ်။ တနေ့တည်းနဲ့ ပို့စ်အများကြီး ပြင်တာမျိုးလည်း ရှောင်ရတော့မယ်။
4:50 AM LeaveaComment Read More
စာမရေးတာ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာခဲ့တော့ စာတစ်ကြောင်းပြန်ရေးဖို့ကိုတောင် တော်တော်လေး အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စဉ်းစားနေရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း အကြောင်းအရင်း (၅)ခုကြောင့် စာမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး-
အင်တာနက် လက်တစ်ကမ်းမှာ မရှိဘူး။
Blog ကို ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုတ်ပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Forum မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ဘလော့မှာ သုံးတဲ့ ယူနီကုတ်ကြား ပြဿနာတော်တော် တက်ခဲ့တယ်။
အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ Domain Name (11dreams.net) က Expired ဖြစ်သွားတော့ တစ်နှစ်စာ Register ပြန်လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ အချိန်တစ်ခုစောင့်နေမိတယ်။
အရင်ရေးခဲ့တဲ့ ဖိုရမ်မှာလည်း အခုတော့ ရေးမယ့်သူလည်းမရှိ ဖတ်မယ့်သူလည်းမလာနဲ့ ဝင်မရေးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။
ပြန်ရေးမယ်လုပ်ပြန်တော့ Blog မှာ Broken Links တွေ တအားများနေတာရယ် Themes တွေ ပြောင်းတာများပြီး ယူနီကုတ်ပြဿနာ ဖြစ်တာရယ်တွေနဲ့ အချိန်မပေးချင်တော့ ပစ်ထားလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် စိတ်တိုင်းကျတဲ့ Themes တစ်ခု ပြီးခဲ့တဲ့လက တွေ့ခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုး စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး သဘောကျတော့ အရင်ကရခဲ့တဲ့ PageRanks အပျက်ခံပြီး အားလုံး တစ်ကနေ ပြန်စခဲ့တယ်။ လောလောဆယ် -
ဖြည်းဖြည်းချင်း Blog က Broken Links တွေပြန်ပြင်နေတယ်။
အရင်က ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ Unicode ပြဿနာလည်း တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွားပြီ။ ဘယ် Browsers နဲ့ ကြည့်ကြည့် ပုံမှန်မြင်ရပြီ။
အင်တာနက်သုံးဖို့လည်း ၁၅၀၀တန် SIM Card တစ်ခု မဲပေါက်တော့ အင်တာနက်လျှောက်ပြီးသုံးတာ အဆင်ပြေနေတယ်။
Domain Name ကိုလည်း ပြန်ပြီး Registration လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
တစ်ချိန်က လူကြည့်များပြီး အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ Articles တွေကို PDF Version ပြန်ပြောင်းဦးမယ်။
သိပ်မကြာခင် Articles တွေလည်း အရင်လို ပြန်ရေးနိုင်တော့မယ်။
1:22 PM LeaveaComment Read More
11:35 AM LeaveaComment Read More
3:46 AM LeaveaComment Read More
11:44 PM LeaveaComment Read More
3:22 AM LeaveaComment Read More
8:49 PM LeaveaComment Read More
4:28 AM LeaveaComment Read More
ကနေ့ ခေတ်မှာ မြန်မာမှု - မြန်မာ့ဟန် - မြန်မာဓလေ့ အငွေ့အသက်တွေကို မြန်မာမိန်းကလေး - ယောကျာင်္းလေးတွေ မေ့ပျောက်လုလု ဖြစ်နေကြတာ ကျွန်တော် သတိထားမိပါတယ်။ တော်တော်လေး ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ - ခေတ်နောက်ပြန် ဆွဲနေတာ မဟုတ်ပါဘူး - အများသူငါ လက်ခံထားကြတဲ့ Globalization ကို အံတုတွန်းလှန်ပြီး နွားလှည်းတစ်စီးနဲ့ ၁၉ ရာစုကို ပြန်သွားနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော် ဆိုလိုတာ။
တိုက်ပုံစွတ်ပြီး ခေါင်းပေါင်း ပေါင်းနေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ -
ချိတ်ထမီ ဝတ်ပြီး ရင်ဖုံးနဲ့ ပွဲတက်ရမယ်လို့ မရည်ညွှန်းလိုပါ -
ဒါပေမယ့် သိစေချင်တာ တစ်ခုက မြန်မာအမျိုးသား - မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်လို ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း ကြောင့် လူပုံအလယ်မှာ အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲ မဖြစ်နိုင်သလို - မြန်မာမှု အသိုင်းအဝိုင်းမှာတင်မက ၊ ကမ္ဘာ့အလည်မှာပါ ဂုဏ်ငယ် သေးသိမ် သွားမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း မြန်မာမိသားစုဝင်များကို သိစေချင်လှပါတယ်။
သင်္ကြန်မိုးဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ ကျွန်တော့် ဘဝတစ်သက်တာ အတွက် အမှတ်တရ အရှိဆုံး သဘောအကျဆုံး ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားပါ။ မြန်မာမှု အငွေ့အသက် - မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် - မြန်မာ့အလှ - မြန်မာ့အက - မြန်မာ့သင်္ကြန်သီချင်း စစ်စစ် တွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ သင်္ကြန်မိုး ဇာတ်ကားဟာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ဘယ်အချိန် ပြန်ကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့ မရိုးနိုင်ခဲ့သေးတဲ့ ကားတစ်ကားပါပဲ - ဒီကားလေးကို ကျွန်တော် Burmese Classic ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က သင်္ကြန်တွင်းကြီး Download ချပြီး သိမ်းထားခဲ့တာပါ။
ဒီကားလေးကို ခု သင်္ကြန်နားနီးလာပြီမို့ မြန်မာမှု အငွေ့အသက်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူ - မြန်မာ့ အတာသင်္ကြန် နဲ့ ရိုးရာ အလှအပ ကို ပြန်လည်ခံစား ကြည့်ရှုချင်သူများ အတွက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်အောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ဒီခေတ်မှာ ဒီလို ငွေငန်းကို မြင်ရနိုင်သေးပေမယ်လို့ ခုလို ငွေငန်းဘေးမှာ လှပတင့်ဖူးစွာ ကပြ ဖျော်ဖြေမယ့် အမျိုးသမီး သင်္ကြန်မယ်လေးတွေ မြင်ရနိုင်ဖို့ ကတော့ မသေချာတော့ ပါဘူး - ဝမ်းနည်းဖို့ အကောင်းဆုံး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဆိတ်သုန်းမှု တစ်ခုပါပဲ။
( ယခင် ရေးသားခဲ့ပြီးသော Post အဟောင်းအား တောင်းဆိုမှုကြောင့် Links အသစ်ဖြည့်သွင်း၍ ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ နှစ်သစ်နှင့် အတူ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအပေါင်း ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။)
11:00 PM LeaveaComment Read More
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က နိုင်ငံပေါင်း ၃၃ နိုင်ငံမှာ ရှိကြတဲ့ ဂီတပညာရှင် ၁၀၁ ယောက် ကိုယ်တိုင်သံစဉ်တွေ ဖန်တီးပြီး YouTube Symphony Orchestra 2011 ပြိုင်ပွဲအတွက် Youtube မှာ Videos တွေ Upload တင်ခဲ့ကြတယ် - အဲ့ဒီ့ လက်ရွေးစင်ဂီတ ပညာရှင်တွေကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက Orchestras ခေါင်းဆောင်တွေရယ် - YouTube community ရယ် အကူအညီနဲ့ စုစည်းရွေးချယ်ပြီး အခု Sydney မှာ ရှိတဲ့ Opera House မှာ ဂရမ်မီဆု ချီးမြှင့်ပေးမယ့် Extraordinary concert ကို ကျင်းပနေပါပြီ - တကယ့် ပညာရှင်တွေပဲဗျာ - Sand Artist ပညာရှင်ရဲ့ ပြကွက်နဲ့ Orchestra ရဲ့ တီးခတ်မှုနဲ့ ပြသွားတာများ ကျွန်တော်ဆို အသက်ရှုဖို့တောင် မေ့နေမိတယ် -
သူက ပညာရှင်တွေရဲ့ တီးခတ်မှု မပြခင် ပညာရှင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘဝသမိုင်းကြောင်းနဲ့ အနုပညာရပ်အပေါ် ခံယူချက်တွေအကြောင်း စကားပြောခန်း အတိုလေးတွေ ထိုးထိုးပြတယ် - အဲ့တာကလည်း အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ် - ကြုံရခဲတဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမျိုးမို့လို့ ကျွန်တော်တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်စေချင်တယ် -
ဒီလောက်ပါပဲ - ကြည့်ရှုချင်သူများ >> http://www.youtube.com/symphony?feature=ticker ကို ကြွပါ။
7:04 PM LeaveaComment Read More
From: Yuko Yasuda, WFP
Subject: Thank you from Japan
I’m deeply grateful for the outpouring of support from all over the world, and for your personal contribution. Thanks to the generosity of friends like you, in just 36 hours we raised all the funds we require for our operation in Japan. Thank you.
11:40 PM LeaveaComment Read More
ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အမေးကို ရံဖန်ရံခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးဖြစ်တယ် -
( ၁ ) ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝပေါများမှုလား
( ၂ ) ငွေကြေးပြည့်စုံ ကုံလုံမှုလား
( ၃ ) လိုတရလောက်တဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းလား
ဒီလိုပဲ ထင်ခဲ့ကြတာပဲ - ငယ်ငယ်တည်းကလည်း ဒီလိုပဲ သင်ခဲ့ကြတယ် - ကျောင်းစတက်ပြီ ဆိုကတည်းက အမေက ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ကို ခဲတံလေး တစ်ယောက် တစ်ချောင်းဝယ်ပေးတယ် - ဒါက သားဖို့ - ဒါက သားအကိုကြီးဖို့ - ဆိုလိုတာ သားဖို့ ဆိုကတည်းက ဒီခဲတံဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု - ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့မှ မပတ်သတ်တော့ဘူး - အဲ့လိုနဲ့ ကျောင်းကို ရောက်သွားတော့လည်း ထိုင်ခုံနေရာတွေ ဆရာမက ချပေးတယ် - ဒါက သားနေရာ ဒါက သမီးနေရာ - အဲ့မှာလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခု ထပ်ရောက်လာပြန်ရော - ဒါကသားနေရာ ဆိုတည်းက ဒီနေရာဟာ ငါပဲ ပိုင်တယ် - မင်းလာထိုင်လို့ မရဘူး - ငါ့နေရာဆိုတာ ငါထိုင်ဖို့ - မင်းထိုင်ချင်ရင် မင်းနေရာ မင်းထိုင် - အဲ့လိုနဲ့ ငယ်ငယ်တည်းက လူ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ရပ်ကို ပြဌာန်းချက် သင်ရိုး မရှိပဲ ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့ရတယ်-
အဲ့လိုနဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ တစ်တန်းပြီး တစ်တန်း ပညာတွေ သင်ခဲ့တယ် - ပညာကို ဘာလို့ သင်နေကြမှန်း ကျွန်တော်တို့ ဂဃနဏ မသိကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ငယ်စဉ်တည်းက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်က ရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် တစ်ခုတော့ ရှိနေကြတယ် - ဆရာဝန်ကြီးတွေ / အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ ဖြစ်ရင် တိုက်အကြီးကြီးတွေ ကားအကောင်းစားကြီးတွေနဲ့ နေရမယ် - ကိုယ်လိုချင်တာ ဝယ်နိုင်မယ် - ကိုယ်စားချင်တာ စားနိုင်မယ် - ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံ ဆိုတာလည်း အများကြီး ရှိလာလိမ့်မယ် - ဒီလိုပဲ ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ် - ပြောရရင်ပညာတတ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ခိုင်းစေချက် တစ်ခုလို့ ယုံကြည်လိုက်တာမျိုးပေါ့ - ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ မိဘတိုင်းကလည်း ပြောကြတယ် -
- နင်စာမကျက်ဘူးလား -
- နင်ပညာမတတ်ရင် ဆိုက်ကားနင်းရမှာ -
- သူများခိုင်းတာ ခံရမှာ -
- ကူလီထမ်းရမှာ - စသဖြင့် ...
တကယ်တော့ ပညာမတတ်တိုင်း ဆိုက်ကားမနင်းရဘူး - သူများခိုင်းတာ တစ်ချိန်လုံး မခံရဘူး - ကူလီမထမ်းရဘူး - ပညာမတတ်လည်း ကြိုးစားမယ် ဝီရိယရှိမယ် ဆိုရင် တစ်ချိန်မှာ သူများကို အထက်စီးကနေ ခိုင်းနိုင်တဲ့ လူချမ်းသာ တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်တာပဲ - အဲ့လိုစိတ်ကို ဝီရိယနဲ့ပေါင်းပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြလို့ဘွဲ့မရပေမယ့် လူချမ်းသာ ဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေလည်း ကမ္ဘာမှာ အများကြီးကို ရှိတယ် - မြန်မာမှာလည်း ရှိတယ် -
အဲ့တော့ ငယ်စဉ်တည်းက ပညာဆိုတာကို ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်း အတွက်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သို့လော သို့လော အတွေးတစ်ချို့ ဝင်လာတယ် -
- ပညာတတ်မှ မဟုတ်ဘူး - ပညာမတတ်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့ ရတယ်
- ပညာမတတ်ခြင်းနဲ့ ပညာမတတ်ခြင်းက ဘာမှ မကွာဘူး
- တစ်ချို့ သူဌေးတွေ ဘာပညာမှ မတတ်ဘူး
- အဲ့လိုလူတွေကပဲ ပညာတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျုပ်တို့ကို ခိုင်းစားနေကြတယ်
- အဲ့တော့ ဒီပညာဆက်သင်တော့ရော ဘာထူးမှာလဲ
- အချိန်ကုန်ခံပြီး ပညာဆက်သင်နေမယ့် အစား စီးပွားရေးထွက်လုပ်တာကမှ လူမွှေးလူတောင် ပြောင်ဦးမယ်
- ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ဒီနေ့ဖြစ်မလား မနက်ဖြန်လာမလား ကြီးပွားနိုင်မယ်
- ပညာဆက်သင်နေရင် အချိန်ကုန်လူပန်း ဘွဲ့ရလာပြန်တော့လည်း အလုပ်ရဖို့ဆိုတာ မသေချာ စသဖြင့် တွေးမိလာကြတယ်
ဒါဟာ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ် မှားယွင်းမှု တစ်ခုပဲ - တကယ်တော့ ပညာသင်ကြား ရခြင်းရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက် ရည်ရွယ်ချက် ထားပြီး သင်ကြားပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး - ပညာသင်ကြားရခြင်းရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်တွေဟာ -
ဆိုတာတွေအတွက် အဓိက ဦးတည်ချက် ထားတယ်ဆိုတာကို လူငယ်တွေ နားလည်ကြဖို့ လိုပါတယ် - ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ပညာကို သင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေရာမှာ တစ်ခုသိထားဖို့ လိုတာက ဘွဲ့ရတိုင်းလည်း ပညာတတ် မဟုတ်ဘူး - လူတစ်ချို့တစ်ချို့ / အတော်များများကပညာတတ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ဘွဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတာနဲ့ တွဲစပ်ရှုမြင် နေကြတယ် - ဆိုလိုတာ -
- ဘွဲ့တွေ တစ်သီကြီး ရထားရင် ပညာတတ်ကြီး
- ဘွဲ့လေး တစ်ခုလောက် ရထားရင် ပညာတတ်
- ဘွဲ့တစ်ခုမှ မရထားရင် ပညာမတတ် ( ဝါ ) ပညာမဲ့ စသဖြင့်
အဆင့်အတန်းကို အလိုလျောက် ခွဲခြားပစ်ကြတယ် - တကယ်တော့ အဲ့ဒီ့ ခံယူချက်တွေဟာ မမှန်ကန်ဘူး - ပညာတတ်ဆိုတာ အတန်းပညာ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ခဲ့ရသည် ဖြစ်စေ - ကိုယ်သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာ ဘာသာရပ်အလိုက် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အံဝင်ခွင်ကျနဲ့ ဆက်စပ် အသုံးချနိုင်စွမ်း ရှိသူကိုသာ ပညာတတ်လို့ သတ်မှတ်တယ်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မှု - ပညာသင်ကြားရခြင်းရဲ့ ကနဦး ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဖို့ - ဆိုလိုတာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး - အမှားနဲ့ အမှန် ကြားမှာ တစ်ခြားသူရဲ့ အမြင်နဲ့ မိမိအမြင်ဆိုတဲ့ အမြင်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပြီး လိုလားချက် ပြီးမြောက်နိုင်မယ့် ဦးတည်ချက်ကို ရှာဖွေနိုင်မယ့် ပညာရပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပညာကို တတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြဌာန်းချက်တွေထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကို သင်ခန်းစာ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ထည့်ထားတယ် - ဥပမာ သချာင်္ - သချာင်္မှာဆို Probability ဆိုတဲ့ အခန်းရှိတယ် - သူက ဖြစ်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဖြစ်တန်စွမ်းကို လေ့လာတာ - စာသင်ခန်းထဲမှာ လက်နဲ့ ချရေးပြီး တွက်ခဲ့ရတဲ့ ဒီပုစ္ဆာတွေကို ခက်လြှပီ ထင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ - လက်တွေ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝင်လာတဲ့အခါ လူအများစုနဲ့ ရပ်တည် လှုပ်ရှားရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေအတွက် Probability ဟာ ဒီ့ထက် ပိုနက်နဲမှန်း သိလာရတယ် - အဲ့လို အခြေအနေမျိုးမှာ ပညာမသင်ကြားခဲ့ဖူး သူတွေအတွက် သင်ရိုးတစ်ခုက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ နိှုင်းယှဉ်ပြီး အမှားအမှန်ကို မဆန်းစစ်နိုင်တော့သလို - ပညာတတ်အမည်ခံ ဘွဲ့ရတွေ ဆိုတာလည်း လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဆက်စပ်သင့်လျှော်မယ့် တွေးခေါ်မှုမျိုး အလုပ်ဆောင်နိုင်ကြတော့ဘူး - သူများပြောတိုင်း ယုံတတ်လာတယ် - ကိုယ့့်ကိုယ်ကိုယ် အားမကိုးချင်တော့ဘူး - ဒီလူပြောလည်း ဟုတ်လောက်ပါတယ် - ဟိုလူပြောလည်း ဟုတ်လောက်ပါတယ် - အဲ့လိုလူတြွေကားမှာ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ သက်သေသာဓကလေးနဲ့ ပြနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် ပြောတာကြားရရင် အဲ့ဒီ့လူကို ပိုယုံသွားတယ် - ဒီလိုနဲ့ ပညာတတ်အမည်ခံ ပညာမဲ့တွေ တစ်စတစ်စ များပြားလာတဲ့ အခါ အိမ်မှာဆို အိမ်တွင်းရေး မသာယာတော့ဘူး - နိုင်ငံနဲ့ ချီတော့ နိုင်ငံရေးတွေ ရှုပ်ထွေးလာတယ် - မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လာတယ် - ကမ္ဘာနဲ့ ချီတော့ မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု - လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားနိုင်သည် ဖြစ်စေ သူ့မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ Limit ဆိုတာ ရှိတယ် - Limit ကိုကျော်ပြီး ဘယ်သူမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး - ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားယူပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုတာ လုပ်ဆောင်ကြရတယ် - အဲ့လိုပဲ တစ်ခုခုကို လိုချင်တယ် ရချင်တယ် ဆိုရင်လည်း အဆင့်လိုက် တစ်ဆင့်ချင်း တက်လှမ်းရယူကြရတယ် - ခု အပင်စိုက် ခု အသီးစားချင်လို့ မရဘူး - ချက်ချင်း လက်ငင်း စွမ်းဆောင်လို့ မရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအတွက် လတ်တလောမှာ ရောင့်ရဲပြီး အနာဂတ်မှာ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအချိန်ပေး ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတာ ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝက စပြီး နားလည်နိုင်အောင် ပြဌာန်းချက်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်း သင်ကြားခဲ့ကြတယ် - ဥပမာ ပြောရရင် ကမ္ဘာ့သမိုင်းနဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းတြွေကည့် - မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဆိုရင် ကိုလိုနီလက်အောက်ခံ ဘဝက လွတ်မြောက်ချင်ပေမယ့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိလို့ ကျရံှုးခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေ - လက်အောက်ခံ ဘဝကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ပြန်ပြီး ကြိုးစားကြတဲ့ နေရာမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုတာကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလို ဖက်တွယ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ရဲဘော်သုံးချိပ် - ဒါတွေဟာ တကယ့်သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်တွေ - ဒီ သင်ရိုးပြဌာန်းချက်ကနေ သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို လက်တွေ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင့်သုံးလိုက်နာနိုင်မှ ဘွဲ့ရတွေလည်း တကယ့် ပညာတတ်ဖြစ်လာမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဘွဲ့ရထားလည်း ပညာမဲ့နေဦးမှာပဲ။
ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်မှု - ငယ်ငယ်တုန်းက ဘွဲ့ဆို ဆရာဝန် / အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့လောက်မှ လူရာဝင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ် - ဆရာဝန် / အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်တော့ရင်ပဲ ကိုယ့်ဘဝက ဆုံးသွားသလို ကိုယ်သင်ခဲ့တဲ့ ပညာက အသုံးမဝင်တော့သလိုလို ယုံကြည်ထားခဲ့တယ် - အဲ့လိုနဲ့ တကယ်တမ်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လာတော့ ပညာရပ်တိုင်းဟာ ကိုယ်ထင်ထားသလို သီးခြားရပ်တည် လည်ပတ်နေတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး - ဥပမာပြရရင် အင်ဂျင်နီယာပညာဟာ သိပ္ပံပညာရပ်နဲ့ ဆက်စပ်သလို သချာင်္ပညာရပ်နဲ့လည်း ဆက်စပ်တယ် - ကွန်ပြူတာနဲ့ ကင်းလို့မရသလို Physics, Chemistry နဲ့လည်း ဝေးလို့ မရဘူး - အဲ့လို ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် ကဏ္ဍတိုင်းကို အပြည့်အစုံကြီး မဟုတ်တောင် တီးမိခေါက်မိ ရှိထားဖို့ လိုလာတယ် - ကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းရတယ် - မေးမြန်းရတယ် - အချိန်တိုင်း လေ့လာနေရတယ် - ဒီလိုဆက်စပ်လေ့လာတတ်တဲ့ အတွေးမျိုး ဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ် လေးငါးခြောက်တန်း လောက်တည်းက သိပ္ပံဘာသာ ဆိုတာ သင်ရတယ် - အတန်းကြီးလာတော့ Science ပေါ့ - သူ့ထဲမှာဆိုရင် လနဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ဆက်စပ်ပုံတို့ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြားက ဆက်စပ်မှုတို့ ဆိုတာတွေကို ခေါင်းစဉ်အသီးသီးနဲ့ သင်ခဲ့ရတယ် - ရည်ရွယ်ချက်က ဒီ သင်ရိုး ပြဌာန်းချက်ကနေ သင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေအတိုင်း လူငယ်တွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်စပ်လေ့လာမှု ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ရနိုင်စေဖို့ - ဒီအသိတရားအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မှ ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီ့ထက်မြင့်မားတဲ့ အသိဉာဏ်ကို ရမယ်။ ဒီ့ထက် ပြည့်စုံအေးချမ်းတဲ့ လူနေမှုဘဝကို ဖန်တီးနိုင်မယ်။ ဘွဲ့သာရခဲ့ပေမယ့် ဆက်စပ်မှုတွေအကြောင်း လှစ်လျူရှုခဲ့ကြရင် ဘွဲ့ရပညာတတ် အမည်ခံထားပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ ပညာမဲ့ ဖြစ်နေကြဦးမှာပဲ။
တည်ဆောက်ရယူနိုင်မှု - လူဆိုတဲ့ သဘောဟာ မွေးလာကတည်းက လုပ်သမျှ အကောင်းချည်းပဲ ဖြစ်လာပါမယ်လို့ အာမခံနဲ့လာတာမျိုး မရှိဘူး - ဘယ်သူမဆို အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရောက်မလာခင် ကျရံှုးမှုဆိုတာ ရင်ဆိုင်ရတတ်တယ် - တစ်ခါတစ်လေ ဗွီဒီယိုတွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ဘာမြှကီးကြီးမားမား လုပ်ရကိုင်ရတာမျိုးမရှိပဲ နေရင်းထိုင်ရင်း ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် စီးပွားရေး သမားဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ချမ်းသာနေကြတဲ့ လူတွေကိုကြည့်ပြီး ငါလည်း သူတို့လို ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ ချမ်းသာနိုင်တာပဲလို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြလိမ့်မယ် - တကယ့် ဘဝမှာတော့ အောင်မြင်တစ်ခု ရဖို့ဆိုတာ အဲ့လောက်မလွယ်ကူဘူး - ကျောင်းသားဖြစ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ်မသင်ချင်တဲ့ ဘာသာတွေ သင်ရမယ် - စီပွားရေး သမားဆိုရင် ကိုယ်မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနဲ့ စီးပွားရေး လှည့်ကွက်တွေ ရင်ဆိုင်ရမယ် - သေချာတာကတော့ ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ကြိုးစားမှုဆိုတာ ချက်ချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ ဘယ်တော့မှ မသေချာတတ်ဘူး - ရံှုးမှာပဲ ကျမှာပဲ - ဘာဖြစ်လဲ ရံှုးတော့ကျတော့ - ပထမဆုံး စလုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ အောင်မြင်မှ ဘဝတစ်သက်လုံး အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ဘယ် လောကနီတိမှာမှ ဆိုမထားဘူး - Harry Potter စာအုပ်ကိုရေးတဲ့ J.K. Rowlingဆိုတာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးစာအုပ်ကို နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခွင့် မရမီအချိန်ထိ ၁၂ ကြိမ်တိတိ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရတယ် - American professional basketball သမား Michael Jordan ဟာ သူ့ရဲ့ basketball သမားဘဝ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ သူပစ်သမျှ ဘောတိုင်း အကြိမ်ပေါင်းမနည်း လွဲခဲ့ဖူးတယ် - ပြိုင်ပွဲပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး ရံှုးခဲ့ဖူးတယ် - ဒါပေမယ့် သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကတော့ မှတ်သားစရာ ကောင်းတယ် - "I have failed over and over and over again in my life. And that's why I succeed." ဒီလူတွေ ဘာကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့ရလဲ ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ ကျရံှုးမှုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်တော့မှ သိမ်ငယ်မသွားဘူး - ဒီကျရံှုးမှုကနေပဲ သူတို့အတွက် သင်ခန်းစာ ပြန်ယူပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားကြတယ် - ဒီလိုဆင်တူတဲ့ ဥပမာတွေ ကမ္ဘာ့သမိုင်း - မြန်မာ့သမိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အကြိမ်ပေါင်းမနည်း သင်ခဲ့ရဖူးတယ် - ကျရံှုးမှု တစ်ခု ရှိလာခဲ့ရင် ဘယ်တော့မှ အားမငယ်ပါနဲ့ - မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြင်ဆင်ပါ - တည်ဆောက်ပါ - ပန်းတိုင်ထိရောက်အောင်သွားပြီး လိုလားချက်ကို ရယူကြပါ - ဒါဟာ ပညာတတ်တွေရဲ့ စံဖြစ်ပါတယ်။
ဖေးမမြှင့်တင်နိုင်မှု - လူတစ်ယောက်ဟာ ဘွဲ့တွေ ဘယ်နှစ်ခုရရ - ဘယ်လောက်ပဲ ကြွယ်ဝချမ်းသာ ချမ်းသာ - ပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ တတ်တတ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ့်နဲ့ တန်းတူ / ကိုယ့်လောက်နီးနီး / ကိုယ့်ထက်ကျော်ပြီး တော်တတ်သိမြင် လာအောင် ကူညီတည်ဆောက်နိုင်စွမ်း မရှိရင် ( ဝါ ) ဖေးမမြှင့်တင်ပေးဖို့ မေ့လျော့ခဲ့ရင် အဲ့လူကိုလည်း ပညာတတ်လို့ သုံးနှုန်းလို့ မရပြန်ဘူး - မြန်မာလူမျိုး အများစုဟာ ပေးကမ်းစွန့်ကျဲဖို့ကိုတော့ ရက်ရက်ရောရော ရှိတတ်ကြပြီး အရင်းအမြစ်ကို မျှဝေပေးဖို့ ဆိုရင်တော့ အလွန်တရာမှကို တွန့်တိုတတ်ကြတာ တွေ့ရတယ် - အဲ့ဒီ့တွန့်တိုမှုကို စကားအရာနဲ့ အလှဆင် ဖာထေးထားတဲ့ ဆရာစားချန် ဆိုတဲ့ စကား တစ်ခွန်းတောင် မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာ ခုချိန်ထိ တွင်တွင်သုံးနေ ကျသေးတယ် - တကယ်တော့ ဖေးမကူညီမှု ( ဝါ ) သင်ကြားပြသမှု တစ်ခုမှာ ဆရာစားဆိုတာ ချန်ထားသမျှ ပြည့်စုံတဲ့ ဖေးမကူညီမှု ( ဝါ ) သင်ကြားပြသမှု တစ်ခု ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်သလို - သင်ကြားပေးသူဘက်က ကြည့်ရင်လည်း ငါ ဆရာစားချန်ထားတာပဲ ဒီကောင့်ထက် အနည်းဆုံးတော့ ငါတစ်ခုပိုသိတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ကြောင့် သူ့ထက်မြင့်တဲ့ ပညာရပ် တစ်ခုကို ထပ်တိုးလေ့လာဖို့ မကြိုးစားဖြစ်တော့ပဲ ဆရာစားချန်ထားတဲ့ ပညာလေးနဲ့ ဆရာဆက်လုပ်ရင်း ဘဝက ကုန်လွန်သွားကြတယ် - သူသေသွားတော့ သူ့တပည့်ကလည်း ဒီနည်းကိုပဲ ဆက်ပြီး ကျင့်သုံးတယ် - အဲ့လိုနဲ့ မြန်မာမှု မြန်မာ့ဟန် မြန်မာ့နည်းပညာဟာ ရှေးယခင်ယခင်တွေတုန်းက ကမ္ဘာမှာ ပြောသလောက် မနိမ့်ပါးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာ နိမ့်ပါးလာခဲ့ရတယ် - ဒီအသိတရားကို သင်ခန်းစားယူပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ ဒီလို မဖြစ်ရအောင် ပြဌာန်းချက် သင်ရိုးတွေမှာ သင်ခန်းစာတွေ ထည့်သွင်းသင်ကြားခဲ့ကြပေမယ့် လူငယ်တွေဟာ သင်ခန်းစာကို သင်ရိုးထဲမှာပဲ ထားပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် - ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း - ကိုယ့်လူမျိုး - ကိုယ့်နိုင်ငံက မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့်ကို လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ကိုတော့ မေ့လျော့နေခဲ့ကြတယ် - ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမေရိကန်ကျောင်းသားတွေကို President Obama ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေး တစ်ချို့ ပြန်သတိရမိတယ် - သူပြောခဲ့တာက -
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အပိုင်း တစ်ပိုင်းတည်းကိုပဲ ကြည့်ချင်မယ် ဆိုရင် ဒီနေရာကနေ ကြည့်ပါ။
Students who sat where you sit 20 years ago who founded Google and Twitter and Facebook and changed the way we communicate with each other.
So today, I want to ask all of you,
what's your contribution gonna be?
What problems are you gonna solve?
Now, your families, your teachers, and I are doing everything we can to make sure you have the education you need to answer these questions. I'm working hard to fix up your classrooms and get you the books and the equipment and the computers you need to learn.But you've got to do your part, too. So I expect all of you to get serious this year. I expect you to put your best effort into everything you do. I expect great things from each of you. So don't let us down. Don't let your family down or your country down. Most of all, don't let yourself down.
ဒီနေ့ခေတ် ဒီနေ့အချိန်မှာ ပညာတတ် အမည်ခံ ဘွဲ့ရသူတွေ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးပွားလာပေမယ့် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို စစ်မှန်တဲ့ ပညာတတ် အရည်အသွေးနဲ့ ရပ်တည်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ လူငယ်တွေကတော့ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာခဲ့ပြီ - ပညာကပေးတဲ့ အနှစ်သာရကို နားမလည်ကြတဲ့ လူငယ်တွေ တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာကြပြီ - ဒါဟာ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ လူသားအရင်းအဖြစ် ပြုန်းတီးမှုပါ - ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ပညာတတ်နဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေ ကြားထဲက ကွာဟချက်တွေကို လူငယ်တွေ အတွေးမမှားရအောင်နဲ့ အယူအဆမှားတွေကို ပြင်ဆင်နိုင်စေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်များ တွေးဆဆင်ခြင် မြှင့်တင် အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။
2:52 AM LeaveaComment Read More
ဒီနေ့ 11Dreams ကို Unicode ပြောင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် - စာလိုက်ဖတ် ဟိုပြင်ဒီပြင်နဲ့ နှစ်နာရီလောက် ကြာတော့ Unicode ကို ပြောင်းထားတဲ့ Blog တစ်ခု ထပ်ရတယ် -
စိတ်ထဲရှိတာ ပြောရရင်တော့ လိုလိုလားလားနဲ့ Unicode ကို အရမ်းပြောင်းချင်နေလို့ ခုလိုပြောင်းလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး- စာရေးချင်လို့ စာရေးတာ - သိပ်ဝါသနာ ပါနေလို့ - မရေးရမနေနိုင်လို့ - ဒီစာရေးတဲ့ အလုပ်ကနေ ပိုက်ဆံရနေလို့ - ရေးနေတာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး - ဖောင့်ထွင်တဲ့သူ မဟုတ်သလို - မြန်မာစာ အက္ခရာနဲ့ ရေးထုံးရေးနည်း ကို လေ့လာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ဘူး - ဘယ်ဖောင့်က ဘယ်လိုကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားထက် လူလူချင်း ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ လတ်တလော ဘာကအဆင်ပြေနေသလဲ ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ် - တစ်ခုကို ပြောင်းလဲဖို့ဆို အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်နည်းတွေ လူပြိန်းနားလည်အောင် ရှင်းပြထားတာမျိုးပဲ ဖတ်ချင်တယ် - ခုတော့ ဒီ Unicode ပြောင်းထားတဲ့ Blog တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ နှစ်နာရီလောက် အချိန်ပေးပြီး ဟိုဝင်ဒီထွက်နဲ့ စာလိုက်ဖတ်နေရတယ် - ဒါတောင် ကိုယ်တွေက ဘလော့သားနဲနဲဝနေပြီး အရိပ်ပြရင် အကောင်ရဲ့ အစွန်းလေးလောက် မြင်တတ်လို့ အဆင်ပြေသွားတာ - စာသိပ်များများ မဖတ်ချင်တဲ့သူ ဘလော့ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ သိပ်အကျွမ်းမဝင်သေးမယ့် သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို ရွာလည်လိမ့်ဦးမယ် -
Unicode ကို အောင်မြင်စေချင်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပြည့်စုံစေချင်သေးတယ် - နားလည်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း FAQs တွေကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဖြည့်ဆည်းကြစေချင်သေးတယ်။
7:53 AM LeaveaComment Read More
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဟိုတစ်နေ့က ဖြစ်သွားတဲ့ ဆူနာမီနဲ့ ငလျင်အကြောင်းကြားရတော့ လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဂရုနာသက်မိကြတယ် - သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာရင် ဒုက္ခသည်ဆိုတာ အလိုလို ရှိလာတာပဲ - ဒါကို လူတိုင်းသိတော့ ခုလို ခိုကိုးရာမဲ့ အိမ်ခြေရာခြေမဲ့ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေ အတွက် ဘယ်လိုကူညီရမလဲ ဆိုတာ လူတိုင်းတွေးမိကြတယ်
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ကူညီနိုင်ပါမလဲ ??
ကျွန်တော်တို့တွေ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေတာ မဟုတ်ပဲ မိုင်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီဝေးကွာမယ့် နေရာမှာ ရှိနေကြမယ် ဆိုရင်တောင် ဂျပန် ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ခုချိန်မှာ ရှိနေပါပြီ - နိုင်ငံအလိုက်ကလည်း ကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေသလို ကမ္ဘာသိ အဖွဲ့အစည်း တွေကနေလည်း စက္ကန့်မလပ် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါပြီ - ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ သူပိုင် ငါပိုင် သူ့ပစ္စည်း ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ ခွဲခြား နေခဲ့ကြပေမယ့် ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ မြေပေါ်မှာ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်တစ်ခုခု ကျရောက်လာပြီဆိုရင် သဘာဝတရားက သူပိုင် ငါပိုင်ရယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မစာနာပါဘူး - အားလုံးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတာပဲ -
ခု သူတို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွေ လုပ်နေကြပြီ - နေရာအသီးသီးမှာ ပိတ်မိနေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီ - နှစ်နဲ့ချီပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ပြည့်စုံမှုကို နာရီပိုင်းအတွင်း အကောင်းပကတိအတိုင်း ပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး - ကယ်ဆယ်ရေး - ကျန်းမာရေး - စားသောက်ရေး - နေထိုင်ရေး - စီးပွားရေး - လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကဏ္ဍအားလုံးကို အချိန်တိုအတွင်း ပြည့်စုံစေဖို့ တစ်နိုင်ငံတည်းရဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး - အဲ့လို အခြေအနေမှာ ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အတူတကွ နေထိုင်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့တွေ လိုလာတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း တစ်ချိန်က ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် - လူအမြောက်အများလည်း သေကျေခဲ့ရဖူးတယ် - ဒီအခြေအနေမျိုး တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ခု ဖြစ်လာပြီ - အဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာတရားနဲ့ စောင့်ရှောက်မှု ပေးကြရအောင်။ သူတို့ ဘဝကို နိုင်သလောက် အတိုင်းအတာနဲ့ ပံ့ပိုးမှုပြုကြရအောင် -
ခုအောက်မှာ ဖော်ပြသွားမယ့် နေရာတွေဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ကူညီမှု ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အမြောက်အများထဲက အနည်းအကျဉ်း ဖြစ်ပါတယ် - မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အနေနဲ့ ကူညီဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ နိုင်သလောက်ပမာဏလေးနဲ့ ကူညီဖို့ အဆင်ပြေကြမှာပါ -
The Red Cross: ဒီနေရာကနေ သွားပြီး အနည်းဆုံး 10$ နဲ့အထက် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကနေ လှူမယ်ဆိုရင်တော့ Text Message မှာ REDCROSS လို့ ရိုက်ပြီး 90999 ကိုပို့ပါ - အဲ့ကနေ $10 လှူလို့ ရပါတယ်။ ( အဲ့လိုပို့လိုက်ရင် Confirm message ပြန်ဝင်လာပြီး အဲ့ကနေ တစ်ဆင့် YES ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ )
Shelterbox: သူက UK-based organization ပါ - သူ့ကို တည်ထောင်ထားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဆူနာမီနဲ့ မြေငလျင်ဒဏ် သက်ရောက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံတွေ အတွက် ထောက်ပံ့ ကူညီမှု လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စေဖို့ပါ - Online ကနေလည်း လှူလို့ ရပါတယ်။ Shelterbox ကနေ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လိုအပ်မယ့် အရေးပေါ်သုံး ပစ္စည်းတွေ - သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ Online donation ကိုဒီနေရာကနေ လုပ်ဆောင်ပါ။
International Medical Corps: သူ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကိုယ်လှူဒါန်းချင်တဲ့ ပမာဏကို ရိုက်သွင်းပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာကနေ သွားပါ။
GlobalGiving.org: International Medical Corps လိုမျိုးပဲ Japan Earthquake နဲ့ Tsunami ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကနေ လှူဒါန်းပေးပါ။
Convoy of Hope: ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို လှူဒါန်းချင်တယ်ဆိုရင် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့ လှူဒါန်းလို့ ရပါတယ် -ဒီနေရာကနေသွားပြီး Online ကနေလှူလို့ ရသလို REDCROSS လိုပဲ ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် Text message နဲ့ TSUNAMI လို့ရိုက်ပြီး 50555 ကိုပို့ပါ ( အဲ့လိုပို့လိုက်ရင် Confirm message ပြန်ဝင်လာပြီး အဲ့ကနေတဆင့် YES ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ )
Salvation Army: Online ကနေ လှူဒါန်းချင်သူများ ဒီနေရာကနေ လှူဒါန်းနိုင်သလို - ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် လှူဒါန်းချင်မယ် ဆိုရင်လည်း JAPAN ( ဒါမှမဟုတ် ) QUAKE လို့ Text message ရိုက်ပြီး 80888 ကိုပို့ပါ - အဲ့ကနေ $10 လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Red Cross in Japan - ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဂျပန်ယန်းနဲ့ လှူဒါန်းချင်မယ်ဆိုရင် Google Checkout ကနေ ဒီနေရာမှာလှူဒါန်းလို့ ရပါတယ်။ ($20 ကိုအနည်းဆုံး ဂျပန်ယန်း 1600 ရှိပါတယ်) - ယန်း ၁၀၀ ကနေ စပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Japan Earthquake Tsunami Children Emergency Fund : အွန်လိုင်းမှာ တော်တော်များများ Facebook games တွေဆော့ကြတယ် - အဲ့ထဲက FrontierVille, FarmVille နဲ့ CityVille ဆော့ကြတဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း ဂျပန်က မြေငလျင်ဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဆော့တဲ့ ဂိမ်းအသီးသီးက items တစ်ခုခုကို ဝယ်သုံးခြင်း အားဖြင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဂိမ်းတွေ မဆော့ဘူး ဆိုရင်လည်း ဒီနေရာကနေ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Photos via Time.com, Boston Bigpicture
5:21 PM LeaveaComment Read More
ဒီ မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာက အမုန်းခံပြီး ရေးနေရတာပါ - လူတိုင်းက မေးရင်သာ အဖြေလိုချင်တာ ဘယ်လိုအချက်တွေ လိုက်နာပြီး မေးပါလို့ အမေးခံရတဲ့သူက ပြောရင်ကျ သဘောမကျ ချင်ကြဘူး - မြန်မာလူမျိုးက ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး အမုန်းခံရတာမျိုး မလိုချင်ကြတော့ စိတ်ကသာ မကြိုက်တာ ပြန်တော့ မပြောတတ်ကြဘူး ( နောက်ကွယ်မှာ ပြောတာမျိုး တော့ လုပ်တတ်ကြတယ် ) အဲ့လို မပြောတာတွေ များလာတော့ မေးတဲ့သူက ဘယ်လိုမေးရမှန်း မသိဘူး - မသိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါမေး - နောက်ဆုံးကျတော့ မေးသာမေးပြီး အဖြေပြန်မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ အများကြီး ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်
အမေးသာရှိပြီး အဖြေပြန်မရတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဖိုရမ်တွေမှာမှ မဟုတ်ဘူး - နိုင်ငံခြားဖိုရမ်တွေ - Discussion groups တွေမှာလည်း အများကြီး ရှိတယ် - အဓိကက
( ၁ ) မေးမြန်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ
( ၂ ) မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာနဲ့
( ၃ ) မေးခွန်း မေးမြန်းပုံ မေးမြန်းနည်း ကို မေးမြန်းမယ့်သူတွေ နားမလည်ကြတာ
ဒီ အချက် သုံးခုထဲက မေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ - မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက် တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ - ခု နောက်ဆုံး ဖော်ပြချင်တာ မေးခွန်းမေးမြန်းပုံ မေးမြန်းနည်း ကို မေးမြန်းသူဘက်က မကြည့်ပဲ ဖြေကြားသူဘက်က မေးခွန်းပေါ် ရှုမြင်တဲ့ အမြင် ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ဖြေကြားသူများ မည်သည့် မေးခွန်းမျိုး ရှောင်တတ်ကြသနည်း။
ဖော်ပြချက် မပြည့်စုံသော - ရည်ရွယ်ချက် မတိကျသော မေးခွန်းများအား ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ပါသည်။ - Forums တွေမှာ မေးမြန်းတာမျိုး ဖြစ်စေ - Discussion groups တွေမှာ ဆွေးနွေးချင်တာမျိုး ဖြစ်စေ - ရည်ရွယ်ချက် မတိကျတဲ့ ဖော်ပြချက် မပြည့်စုံတဲ့ မေးမြန်းမှုမျိုးတွေကို ဖြေကြားသူတွေ ရှောင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဖော်ပြချက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ တိကျတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်အောင် Stupid နဲ့ Smart မေးမြန်းပုံ အဆင့်ဆင့်ကို နိှုင်းယှဉ်ပြလိုက်ပါတယ်။
Stupid - ကူညီပါဦး - ကျွန်တော့် လက်ပတော့က အခြွေကည့်ရင်းနဲ့ ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူး - ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို အမြန်ဆုံး ကူညီပေးပါ။
Smart - ကျွန်တော့် လက်ပတော့ အမျိုးအစားက SAMAUNG ..??... ပါ - Windows ..??.. / Linux Distros ..??.. တင်ထားပါတယ် - 32/64 bit Operating system ပါ - RAM က .??.. GB ပါ - VGA အမျိုးအစားက ?? ... , ..??. GB ပါ - ဖြစ်တာက ..??.. စက်က Hang ပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့ မရပဲ စာတက်လာပါတယ် - အရင်က အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ မနက်က Update ပေးပြီး / Software ?? တစ်ခုတင်လိုက်မိပါတယ် - ဒီ ပြဿနာ အတွက် ကျွန်တော် ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ ပြေလည်နိုင်မယ် ဆိုတာ သိပါရစေ။
Smarter - ကျွန်တော့် လက်ပတော့ အမျိုးအစားက SAMAUNG .??... ပါ - Windows ..??.. / Linux ..??.. တင်ထားပါတယ် - 32/64 bit ..??.. Operating system ပါ - RAM က ..??.. GB ပါ - VGA အမျိုးအစားက ..??.. , ..??. GB ပါ - ဖြစ်တာက ..??.. စက်က Hang ပြီး ဘာမှဆက်လုပ်လို့ မရပဲ စာတက်လာပါတယ် - တက်လာတဲ့ စာက " ....... " ပါ - Screenshots ကို အောက်မှာ ကြည့်ပါ - အရင်က အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ မနက်က Windows Update ပေးပြီး / Software ?? တစ်ခု တင်လိုက်မိပါတယ်။ ဆိုင်မဆိုင် ကျွန်တော် မသိပေမယ့် ကျွန်တော် System Restore လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာလည်း Windows ထဲကနေ Restore လုပ်လို့ မရဖြစ်နေပါတယ် - တစ်ခြား နည်းလမ်းလည်း ကျွန်တော် မသိတော့ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီ ပြဿနာ အတွက် ကျွန်တော် ဘယ်လိုနည်းမျိုးနဲ့ ပြေလည်နိုင်လောက်မယ် / တစ်ခြား ဘယ်နေရာတွေမှာ လေ့လာနိုင်မယ်ဆိုတာ အကြံဉာဏ်လေးများ သိပါရစေ။
အရေးတကြီးနှင့် အရေးပေါ် ဆိုသော မေးမြန်းချက်များအား ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ပါသည် - မေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့ နေရာမှာ အရမ်းအရေးကြီးနေလို့ပါ - အရေးပေါ် ဖြစ်နေလို့ပါ ဆိုတာမျိုး တတ်နိုင်ရင် မဖော်ပြပါနဲ့ - ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အရေးကြီး အရေးပေါ် ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်ဟာ ဖြေကြားသူကို ပြည့်စုံမယ့် အဖြေတစ်ခု ဖြေကြားပေးနိုင်ဖို့ လုံလောက်မယ့် ပြင်ဆင်မှု ဦးစားမပေးနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောကို သက်ရောက်စေပါတယ် - ကိုယ့် အခက်အခဲ မဟုတ်တဲ့ ပြဿနာရပ် တစ်ခုကို မျက်စိရှေ့မှာ ဘာမှ မတွေ့မြင်ရပဲ ချက်ချင်းကြီး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာ တော်ယုံမဖြစ်နိုင်ပါဘူး - အဲ့လို အခြေအနေမှာ စိတ်ထဲ ထင်မိတာကို ချက်ချင်း Reply ပြန်လိုက်ပြန်ရင်လည်း ဖြေလိုက်တာပဲ အဖတ်တင်ပြီး ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ မပြေလည်မှာ စိုးတာကြောင့် ဖြေကြားဖို့ ရှောင်တတ်ကြပါတယ်။
Private E-mails ပေးပို့ မေးမြန်းမှုများသည် ဖြေကြားသူအား အခက်တွေ့ စေပါသည် - မိမိနဲ့ ခင်မင်ရာ ခင်မင်ကြောင်း ရင်းနှီးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆီ ကိုယ့် အခက်အခဲအတွက် Private E-mails ပေးပို့ မေးမြန်းခြင်းမျိုးဟာ မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်ပြီး ဖြေကြားပေးမယ့်သူအပေါ် အကျပ်တွေ့စေပါတယ် - လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ သူနားလည် အားသန်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြပေမယ့် - လူတိုင်းဟာ ပြဿနာရပ်တိုင်းကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် မရှိကြပါဘူး - ဒါတင်မက ကိုယ်က ဒီတစ်ခါလေးပဲ Private E-mail နဲ့ အကူအညီတောင်းဖူးသေးတာလို့ ယူဆနေပေမယ့် တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ ကိုယ်လို တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း အကူအညီတောင်းဖူးပါတယ်ဆိုတဲ့ E-mails မျိုးတွေ ဖြေကြားသူ ဘက်မှာ ဘယ်နစောင်လောက် ရှိနှင့်နေမလဲ ဆိုတာ ငဲ့ကွက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကို Respect ပေးပါ။ Private E-mails ပေးပို့ မေးမြန်းတာမျိုးထက် လူအများ ဝိုင်းဝန်း ဖြေကြားပေးနိုင်အောင် အမေးအဖြေကဏ္ဍ အောက်မှာပဲ Public မေးမြန်းမှုမျိုးပဲ လုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ယဉ်ကျေး ညက်ညောမှု မရှိသော ပြန်ကြားချက်နှင့် မေးမြန်းမှုများအား ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ကြပါသည် - ဖိုရမ်မှာ မေးမြန်းမှု တစ်ခု တက်လာခဲ့ရင် မိသားစုဝင်တော်တော်များများ ဖြေကြားပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ် - တစ်ချို့လည်း တတ်သလောက် နားလည်သလောက် ဝင်ပြောကြတယ် - တစ်ချို့လည်း အသေးစိတ် - တစ်ချို့လည်း အပေါ်ယံ - တစ်ချို့လည်း သာမန်ကာလျှံကာ - ဘယ်လို Reply ပဲ ပြန်ရသည် ဖြစ်စေ - မေးမြန်းသူ အနေနဲ့ ကိုယ့်ပြဿနာကို ပြေလည်နိုင်စေဖို့ ကူညီဖြေကြားပေးသူတွေကို ခုလို ကူညီပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားမျိုး Reply မှာ အဦးဆုံး ပြောကြားပေးပြီးမှ ကိုယ့်ပြဿနာ ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ပြေလည်မှု အဆင့်ဆင့်ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် - အဲ့လို Reply ပြန်ရခြင်း အားဖြင့် ဝင်ရောက် အဖြေရှာပေးသူအတွက်လည်း ကိုယ်ဖြေကြားပေးလိုက်တဲ့ ပြဿနာရဲ့ ပြေလည်မှု အဆင့်ကို သိရလို့ ကျေနပ်မှု ဖြစ်စေသလို - အကယ်၍ မပြေလည်ခဲ့သေးဘူး ဆိုရင်လည်း ဘာတွေ ဖြည့်စွက်ဖို့ လိုဦးမယ်ဆိုတာ ကူညီဖေးမလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အပြင် - ဘေးကရပ်ကြည့် နေသူတွေ အနေနဲ့ပါ ကိုယ်သိထားတဲ့ အလျှောက် ဝင်ရောက် ကူညီလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ ပြောင်းပြန် အနေနဲ့ Reply ပြန်လိုက်ပေမယ့် အဆင်ပြေမှန်း မပြေမှန်း ဘာမှ မသိရတဲ့ မေးမြန်းချက်မျိုးတွေ - ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဖို့ကျ စကားမဟပဲ ကိုယ့်ဘက်က အဆင်မပြေတာတွေ -ခင်ဗျားပြောတဲ့ အတိုင်း လုပ်လိုက်တာ ဘယ်လိုတွေတော့ ဖြစ်ကုန်ပြီ ဆိုတဲ့ အပြစ်တင်စကားမျိုး ပြောတဲ့ ပြန်ကြားချက်မျိုးတွေဟာ ဖြေကြားသူအတွက် စိတ်ကွက်စေသလို - အခြားဖြေကြားပေးမယ့် သူတွေကိုပါ လက်ရှောင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဘာတစ်ခုမသိသည့် မေးမြန်းချက်မျိုးအား ဘာမှမသိသကဲ့သို့ ဖြေကြားသူများ ရှောင်တတ်ကြပါသည် - မေးခွန်းဆိုတာ မေးတိုင်း မကောင်းပါဘူး - Differential equations တွေရဲ့ ဖြေရှင်းပုံကို နားမလည်ပဲ Biological process တွေ - Technical process တွေ - Bridge design တွေအကြောင်း နားလည်နိုင်ဖို့ မကြိုးစားချင်ပါနဲ့ မသိချင်ပါနဲ့ - ဆိုလိုတာ ကကြီး ခခွေး မရေးတတ်ပဲ စာစီမကုံးချင်ပါနဲ့ - အဆင့်မြင့်မြင့် သိချင်တဲ့အခါ အခြေခံ နားလည်ရမယ့် အချက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်ပြီးသား ဖြစ်ဖို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် အရင်တည်ဆောက်ပါ။
ကျွန်တော် ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆိုရင် မေးမြန်းမှု အတတ်ပညာရဲ့ နက်နဲပုံနဲ့ မေးမြန်းသင့်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို မိသားစုဝင်များ နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ လေ့လာပါ - မေးမြန်းပါ - သို့ပေမယ့် မေးမြန်းသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ - မေးမြန်းသင့်တဲ့ နေရာနဲ့ မေးမြန်းပုံ မေးမြန်းနည်းကိုတော့ အစဉ်သဖြင့် ဂရုပြုကြဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပြု လိုက်ပါရစေ။
2:01 AM LeaveaComment Read More